Ọka Ọhụrụ Apụtala - Igbo News | News in Igbo Language
Jun 12, 2021 - 17:05
Chinwendu Uzoatu dere edemede a
Ọka bụ ihe oriri na-amasị nwoke na nwaanyị, ma onye ukwu ma onye nta. O so n’ihe izizi na-apụta n’ime ihe ndị ọzọ niile a na-akọ n’ugbo. Ndị mmadụ na-eji ọńụ anabatata ọka n’ihi na mmadụ niile na-ata ma na-ejikwa ya eri ihe ndị ọzọ dị iche iche.
A na-eji ube ata ọka ma jirikwa akụoyibo na-ata ya. N’ụzọ dị otu ahụ, a na-ahụ ya n’ọkụ maọbụ sie ya esi, ebe ụfọdụ na-eghekwa ya eghe. Ka o siri dị bụ na ọka na-atọ ụtọ, otu ọbụla e siri kwado ya.
Ọzọ dị ka ibe ya bụ na a na-ejikwa ọka esikọ ihe ndị ọzọ dịka agwa, abacha, ụkwa, akịdị w.d.g. Ọ na-abụ ezigbo erimeri mgbe ọbụla e jiri ọka sikọọ otu n’ime ihe ndị a. Ọ na-atọ ụtọ ma na-enyekwa ihe n’ahụ. Onye richaa, ọ na-ańụ mmiri.
Ka ọ dị ugbu a, ọka na-apụta nwayọọ nwayọọ, ọtụtụ ndị na-akọ ya ebupụtabala ya n’ahịa. Otu o siri dị ugbu a, o jubeghị eju ebe niile. Dịka a na-ere ya n’ahịa a na-ahụkwa ya n’ọkụ na njikọ tinyere akụkụ ụzọ dị iche iche, ma na-esikwa ya esi.
Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuputala obi ha banyere ọka ọhụrụ na-apụta ugbua.
Ken Ugwuanyị: Ọka bụ ezi ihe oriri. Ataala m ọka ọhụrụ. Ọka nke m tara tọrọ ụtọ nke ukwu. Hei, ọ tọka! Egotere m ya n’aka ndị na-ańa ọka n’akụkụ ụzọ ebe m bi. Ha hụrụ ya nke ọma, nke na ị na-ata, ọzọ a na-agụ gị. Ma ihe m chọpụtara bụ na ụkwara na-akwa m tupu m taa ọka ahụ, mana ka ọ dị ugbu a ụkwara ahụ ekwezighị akwụsị akwụsị. Amaghịzịm ma ọ bụ ọka ọhụrụ ahụ m tara mere na ụkwara ekwezịghị akwụsị. Ihe m ji ekwu bụ na amaghị m ma ha ahụkwara ya ka o ghee nke ọma n’ọkụ.
Oriakụ Uche: Abụ m onye ọrụ oyibo. Ọka so n’ihe ndị m na-akọ n’ugbo m n’ihi na ọ na-enye m ọńụ ma m bido gbutebe ya. Maka m na-egbute ọka n’ugbo m, m na-erekwa ya n’ahịa were na-enweta ego. Ọka bụ ara na-azụ nwa, a na-esi ya esi, a na-ahụ ya n’ọkụ ma jirikwa ya na-esikọta erimeri ndị ọzọ. Ọka bara nnukwu uru. Ọ na-eju afọ ma na-enyekwa ego.
Nwakaego Ume: Ataala m ọka ọhụrụ. Mmadụ gotere ọka a hụrụ n’ọkụ nyetụ m. Ọka ahụ tọrọ ụtọ nke ukwu maka na ọ bụ ụbọchị ahụ ka e gbutere ya n’ugbo. Ụtọ ọka bụ ma ị taa nke e gbutere ụbọchị ahụ. Ọka dịrị gaba abalị olemole e gbutere ya, ọnaghị atọcha ụtọ dịka o kwesịrị. Ugbu a ọka ọhụrụ na-apụta n’ike n’ike, obi na-atọ m ụtọ maka na ọka na-amasị m nke ukwu. Ejighị m ya egwu egwu, ana m ata ma nke a hụrụ n’ọkụ ma nke e siri esi. Eji m ya eme ihe oriri. Mgbe ọbụla m tara ọka, anaghị m achọzị ihe ọzọ m ga-eri, ihe m na-emezi bụ ịdị na-ańụ mmiri. Ọzọ dịka ibe ya bụ, e wepụgodu na ọka na-atọ ụtọ, ọ na-enyekwa ihe n’ahụ maka na ọ bụ ezigbo nri.
Ogoegbu Nneka: Ana m ere ọka afọ ọbụla. N’afọ a, ọka amalitela ịpụta nwayọọ nwayọọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-agala ọnụ maka na o jubeghị eju n’ahịa. Ana m esi Awka gaa Onitsha gota ọka. Ihe a na-ere otu akpa ọka ugbu a nọ n’agbata puku naịra asaa, mgbe ụfọdụ o tinye etinye maọbụ wepu ihe. Anyị buru ya lọta Awka, anyị a na-eresi ndị mmadụ site n’otu anyị siri gota. Ndị mmadụ na-agba anyị akaahịa nke ọma, ma ndị na-ere ere ma ndị na-egoro ya laa be ha, jiri aka ha kwado ya otu ha siri chọ. I buru ọka na-abata, ozugbo ahụ ka ndị mmadụ ga-abịa n’ọdụ ahịa gị na-egokọrọ ọka.
Dịka m kwuru na mbụ, ọka dị oke ọnụ ugbu a, mana enwere m olile anya na ọ ga-adatu. Oge adịghị anya ọka ga-eju n’ahịa, nke na ọ ga-abụ atụrụ taba. Onye ọbụla ga-ataju ọka afọ. I legharịa anya, ị ga-ahụ na ọka na-eme nke ọma n’ugbo niile dị na gburugburu anyị.
Cynthia Eze: Ozugbo m malitere ịhụ ọka n’akụkụ ụzọ ebe a ka ndị mmadụ malitere na-ego ọka na-ata. Ọtụtụ na-abịa were oche na-eche ka m hụpụta ọka. Ka ọ dị ugbu a, ihe a na-eresị anyị ọka bụ anọ maọbụ atọ narị naịra abụọ; m hụchazie m na-eresi ndị mmadụ otu ọka otu narị naịra.
Ana m agba mbọ na-egota ole ọka m ga-enwe ike rechaa n’otu ụbọchị. Nke a pụtara na ana m aga ahịa egota ọka ụbọchị ọbụla. Mgbe ụfọdụ ana m agakwa n’ugbo, gote ọka. Mgbe ọbụla m siri n’ugbo gote ọka, ọ na-enye m afọ ojuju maka na ọka ọbụla a hụrụ n’ọkụ ozugbo e gbutere ya na-atọ ụtọ n’ụzọ pụrụ iche. Ndị mmadụ na-ata ya n’eleghị ego anya n’ihu. Ụmụikorobịa bụ ndị kacha agba m aka ahịa. Ha na-abịa nọrọ ala taa ọka ma gonyekwa ndị enyi ha.